Bahda Suxufiyiinta Soomaaliyeed Ee K/Afrika (SOJASA), Oo Si Murugo Leh Uga Tacsiyeynaya Geerida Ku Timi Rugcadaagii Saxaafadeed Ee C/qaadir Jiiroow Sharma'arke
Bahda Suxufiyiinta Soomaaliyeed Ee K/Afrika (SOJASA), Oo Si Murugo Leh Uga Tacsiyeynaya Geerida Ku Timi Rugcadaagii Saxaafadeed Ee C/qaadir Jiiroow Sharma'arke Khamiis 5 July 2012 SMC
Bahda Suxufiyiinta Soomaaliyeed Ee K/Afrika (SOJASA), Oo Si Murugo Leh Uga Tacsiyeynaya Geerida Ku Timi Rugcadaagii Saxaafadeed Ee C/qaadir Jiiroow Sharma'arke Ururka Suxufiyiinta Soomaaliyeed Ee Koonfur Afrika (SOJASA), ayaa tacsi tiiraanyo leh u diraya dhammaan bahda saxaafadda Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan iyagoo uga tacsiyeynaya geeridii naxdinta laheyd ee saaka oo Khamiis ah (5-07-2012) ku timid ALLAHA u naxariistee Rug-cadaagii Saxaafadeed ee caanka ahaa C/qaadir Jiiroow Sharma'arke.
"INAA LILAAH WA INAA ILAYHI RAAJICUUN, waxaa saakay oo ay taariikhdu ku beegan tahay 5-ta bisha Luulyo 2012, Saxaafadda Soomaaliyeed ka baxay Tiir udub dhexaad u ahaa Warbaahinta wadankeena hooyo ee Somalia, aad iyo aad ayaan uga naxnay geerida macalinkeena cilmiga warbaahinta u saaxiibka ahaa" ayaa lagu yiri War-saxaafadeed Tacsi ah oo kasoo baxay Xafiiska Ururka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee K/Afrika (SOJASA) ku leeyihiin Magaalada Cape Town.
EEBE Naxariistii janno haka waraabiyee, C/qadir Jiiroow Sharmaake, oo ahaa Agaasimihii Ugu Dambeeyey ee Idaacadda Horn Afrik ka dib dilkii ALLAHA u naxariistee Saciid Tahliil Axmed, islamarkaana kasoo shaqeeyay Radio Muqdisho xilligii bari-samaadka, waqti xaadirkanna ka tirsanaa idaacada Mustaqbalradio, ayaa saakay ku geeriyooday Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Somalia.
Sida ay qaar ka mid ah eheladiisa inoo xaqiijiyeen Ustaad C/qadir Jiirow Sharma'arke, ayaa waxa haleelay xanuun dag dag ah oo 2 cisho un uu la xanuunsanayay kaas oo uu ugu danbayn u dhintay, waxaana uu ifka uga tagay 9 caruur ah, iyadoo qaban qaabada aaskiisa oo ay horboodayaan Bahda saxaafadu iminka laga wado magaalada Muqdisho.
Ururka Suxufiyiinta Soomaaliyeed Ee Koonfur Afrika ee ku midaysan Dalad-saxaafadeedka SOJASA, waxa ay tacsi u dirayaan dhammaan Bahda Saxaafadda ee uu ka geeriyooday rug-cadaagii weynaa ee saxaafadda ku gaamuray marxuum C/qaadir Jiiroow Sharma'arke. waxayna si gaar ah ugu tacsiyeynayaan eheladii iyo asxaabtii Ustaadka, waxayna ALLE uga baryayaan in uu Janatul-firdowsa ka warabiyo anaga samir iyo iimaan naga siiyo........ AAMIIN AAMIIN AAMIIN
INNAA LILLAAH WA INAA ILAYHI RAAJICUUN
Xafiiska Ururka Suxufiyiinta Soomaaliyeed Ee Koonfur Afrika (SOJASA)
Email : info@sojasa.com